LG's Knock Code ve dia hevitra fiarovana azo antoka amin'ny hidin-trano? | Androidsis
LG's Knock Code ve dia hevitra fiarovana azo antoka amin'ny hidin-trano?
Cristina Torres sary placeholder | | Finday, fiarovana
Heveriko fa miaraka amin'ny zava-baovao be dia be amin'ny toetra ara-teknika natolotry ny LG G3 Ary ambonin'izany rehetra izany amin'ny fisalasalana be momba ny daty ofisialy ofisialy tany Espana momba ny fijanonan'ny sainam-pirenena Koreana farany indrindra, tsy nahita safidy vitsivitsy izahay, na dia efa lasa any aoriana aza izy ireo, heveriko fa tsy maintsy apetraka aloha izy ireo satria mendrika taratra. . Tamin'ny faramparan'ny tobiny farany dia nanomboka ny LG a rafitra hamaha efijery tsy mitovy amin'ireo fantatsika hatreto amin'ny tsena. Amin'ny ankapobeny, manome toky izy ireo fa azo antoka kokoa io, saingy hitanay fa tamin'ity dingana ity, ireo rafitra mamoha dia niova ho lasa toetra tsy manam-paharoa amin'ny fampifangaroana mpampiasa Android samihafa an'ny mpanamboatra.
Tsy vao sambany ny marika iray dia tapa-kevitra ny handefa miaraka amin'ny terminal kintana ny efijery fanidiana terminal misy a fomba hafa manokana. Raha ny marina dia lasa toeram-piterahana ho an'ny fampandrosoana ny rindranasa mamela ny halain-tahaka amin'ny terminal hafa izay tsy an'ny marika ireo fa mihodina amin'ny rafitra fiasa Android. Na ahoana na ahoana, toy ny LG G3 Izy no farany nitondra an'io fanovana io niaraka tamin'i Knock Code ary toa tena liana amin'ny fijerinay ny fomba fiasa ilay orinasa, dia hijery horonan-tsary vitsivitsy izahay izao ary handinika izany lalina.
Tian'i LG hihaona amin'ny Kaody Knock ianao
Marina satria ny endri-javatra ny rafitra fanalana sarimihetsika LG vaovao dia hadino talohan'ny toetra mampiavaka ny fakan-tsary na ny fanavaozana ny fakantsariny ao amin'ny fampisehoana ny LG G3, izao ny orinasa koreana dia mandefa andian-dahatsary izay mampiseho amintsika ny antony hamoronana rafitra fanokafana efijery vaovao ary hampitaha azy amin'ireo izay mahazatra indrindra an-tsena. Andao jerena izy ireo alohan'ny hanomezana hevitra momba ny iray amin'ireo fomba fidirana amin'ny terminal finday ireo
Knock Code vs. Model Unlock
Knock Code vs. Pin Unlock
Knock Code vs. Fingerprint Unlocking
Ny kaody Knock vs. mamoha miaraka amin'ny famaritana tarehy
Amin'ny maha-zava-baovao azy ary angamba ho fomba iray hanavahana ireo terminal LG manohitra ny fitomboan'ny fifaninanana dia tsy ratsy velively ilay hevitra naroson'ny Koreana. Na izany aza, tokony hieritreritra isika fa ny fisokafan'ny efijery, fa tsy hanompo ho takatry ny hafa amin'ny maha-hafa azy, dia tokony hikatsaka ny hiaro ny vavahadin-tsofintsika amin'ireo mpiditra an-tsokosoko, ary koa hanamora ny fampiasan'ny mpampiasa rehetra. Raha tsy izany dia mitranga toy ny amin'ity tranga ity miaraka amin'ny Kaody fandondonana, fa ny mpamokatra tsirairay avy dia mamorona ny azy manokana, mieritreritra aho fa tamin'ny farany dia hadinontsika ny ampahany azo antoka amin'ny fiarovana sy ny fanamorana ny fampiasana ho an'ny mpampiasa Android ary navadikay ho lasa namboarina sy tsara tarehy ilay fiasa. Raha atao teny hafa, dia ataontsika ambony noho ny tena zava-dehibe ny faharoa.
Tsy manohitra aho Knock Code nataon'i LG, na ireo rafitra fisokafan'ny efijery hafa an'ny orinasa tsirairay. Raha ny tena izy manokana, ilay Koreana dia toa iray amin'ireo manavao sy mahaliana ahy indrindra. Saingy heveriko fa ny fomba fanatonana an'ity fironana vaovao ity dia tsy ny tena mety indrindra amin'ny fidiran'ny mpampiasa, ary tsy mamela ny fampandrosoana iraisan'ny fanatsarana ny fiarovana amin'ny terminal Android. Noho izay antony izay ihany dia mino aho fa tokony hijanona ny mpamokatra hisaintsaina an'io fironana io, ary angamba, angamba handinika fari-pitsipika iraisana iray izay manamora ny fiainana ho antsika rehetra. Ahoana ny fahitanao azy?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » LG's Knock Code ve dia hevitra fiarovana azo antoka amin'ny hidin-trano?
Hatsarao ny fahombiazan'ny LG G2 amin'ny alàlan'ny fanavaozana azy amin'ny Android 4.4.4
Ny singa voalohany amin'ny BlackPhone dia alefa amin'ireo mpampiasa nanao ny famandrihany